WARBIXIN: Soo Laabashada Ramos, Xaalada Mendy, Valverde Iyo Nacho & Xogtii Ugu Dambaysay Ee Dhaawacyada Real Madrid - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWARBIXIN: Soo Laabashada Ramos, Xaalada Mendy, Valverde Iyo Nacho & Xogtii Ugu Dambaysay Ee Dhaawacyada Real Madrid
WARBIXIN: Soo Laabashada Ramos, Xaalada Mendy, Valverde Iyo Nacho & Xogtii Ugu Dambaysay Ee Dhaawacyada Real Madrid
April 30, 2021 Apdihakem Omer Adam Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinadine Zidane ayaa war kala duwan ka helaya xaalada dhaawacyada kooxdiisa, warka ugu wanaagsan ee uu haysto ayaa ah in kabtankiisa Sergio Ramos uu tababarka buuxa qaatay isla markaana la filayo inuu qayb ka qaato kulanka Osasuna ee habeen dambe.
Qorshaha Zidane ayaa la filayaa inuu yahay inuu daqiiqado ka ciyaarsiiyo Ramos ciyaarta berri ee horyaalka La Liga si uu taam buuxa ugu noqdo kulanka Arbacada ay Stamford Bridge ku kala baxayaan Chelsea.
Soo laabashada Ramos ayaa imanaysa xilligii uu ugu baahida badnaa tababare Zidane gaar ahaan kaddib dhaawaca la sheegayo inuu inta xilli ciyaareedkan 2020-21 ka dhiman seejin doono daafaca midig ee Dani Carvajal.
Dhaawaca uu Sergio kasoo laabanayo ayaa ahaa mid kusoo gaadhay xulka qaranka Spain, soo laabashadiisa ayaa niyad samaan weyn u ah daafaca Los Blancos walow Eder Militao iyo Nacho ay shaqo cajiib ah sii qabteen mudada uu garoomada ka maqnaa.
Dhinaca kale, daafaca bidix ee Real Madrid ee Ferland Mendy oo isaguna dhaawac ku maqnaa kulamadii ugu dambeeyay ayaan wali taam buuxa ahayn oo sii wada tababarka uu kaligii samaynayo lamana filayo inuu diyaar u noqdo ciyaarta Chelsea ee Arbacada.
Khadka dhexe ee ree Uruguay ee Federico Valverde ayaa isaguna wali qaba calaamadaha xanuunka dhawaan laga helay ee Korona Fayras, soo laabashadiisa ayaa ku xidhnaan doonta natiijada baadhitaanka ugu dambeeya ee lagu sameeyo balse waxa laga rajo qabaa inuu London u safri doono.
Ugu dambayn, Nacho oo isagana jugi ku gaadhay kulankii Chelsea ee Salaasadii isla markaana ka maqnaa tababarkii shalay ee kooxdiisa ayaa la filayaa inuu maanta oo Jimce ah tababarka ka qayb qaadan doono.